Ogaden News Agency (ONA) – Golaha Sare ee IleysTV oo ka Shiray Tayaynta iyo isk-xidhka Barnaamijyada ka Baxa Ileys
Golaha Sare ee IleysTV oo ka Shiray Tayaynta iyo isk-xidhka Barnaamijyada ka Baxa Ileys
Posted by ONA Admin	/ February 24, 2015
Waxaa shir wada-tashi ah yeeshay Golaha Sare ee IleysTV. Shirka ay masuuliyiinta ku kulmeen ayaa lagaga arinsanay laba qodob oo kala ahaa;
Shaqada iyo Horumarinta Ilays TV.
Qaabkii loo xoojin lahaa isku xidhida Xarumaha Ilays TV
Waxaa shirka furay Gudomiyaha Hoggaanka warfaafinta JWXO oo ka hadlay dareenka Bulshada iyo baahida loo qabo barnaamijyo tayaysan oo kabaxa IlaysTV. Sidoo kale Gudomiyuhu waxa uu xog kooban ka bixiyay u jeedada kulankan, isagoo ammaan u soo jeediyay shaqada lagu diirsaday ee ka socota Studiaha cusub ee Ilays Bariga Afrika ka hirgalay. Gudomiyuhu waxaa kale oo tilmaamo uu ka bixiyay qaabkii loo hormarin lahaa Barnaamijyada ka baxa ilays TV, gaar ahaan sidii la isugu xidhi lahaa Studiha London iyo Nairobi. Kadib gudomiyuhu waxa uu ku soo wareejiyay Mustafe Xassan oo ah masuul ka socda Studio London ahna madaxa ONA, isagoo ka waramay Shaqada Ilays gaar ahaan xarunta ilays ee London.
Mustafe waxa uu ka war bixiyay in siminaaro dhawaan loo qabtay shaqalaha Ilays UK, siminaradaas oo goob joog ay ka ahaayeen gudomiyaha JWXO iyo Gudomiye ku xigeenka HWF. Wuxuu sheegay Mustafe inay siminaradaas kasoo baxeen xubno cusub oo wariyaal lab iyo dhadigba leh, balse laga xusay Cabdirisaaq Gufeys iyo Cabdirashiid, iyo xubno kale oo howlgalkoodu wali taabo galin balse qeyb ka noqon doona barnaamijyadan.
Wariye shugri, Cabdirisaaq, Leyla iyo Cabdirashiid ayaa ah hada xubnaha wariyaasha ah ee ka muuqda barnaamijyada Ilays laantiisa London, iyada oo jiri doonaan xubno gabdho ah oo codeynta barnaamijyada ka qeyb qaadan doona.
Mustafe waxa kale oo ka waramay, dhowaan caqabado lasoo darsay shaqada ilays london oo hakad ku yimid, oo ku aadan barnaamijyada gaar ahaan soo deyntooda midkaas oo xalkeedina la isla gartay.
Ka dib waxaa warbixin laga dhagaystay Agaasimaha Guud ee WF Mudane Uula waxa uu ka waramay baahida iyo duruufta loo aasaasay Ilays Nairobi, Waxa kaloo uu ka waramay qorshaha loo dajiyay Ilays nairobi gaar ahaan barnaamijyo cayiman oo loo qoondeeyay inay ka baxaan ilays tv. Agaasimuhu waxa kale oo ka waramay duruufaha ku xeeran hawl-wadeenka Studio-ga Nairobi oo sheegay in laga warhayo duruufaha imana kara.
Gudomiye Ku xigeenka HWF Mudane Maxamed Cali, ayaa ku dhiiri galiyay sidii loo meel marin lahaa qorshayaasha ilays tv gaar ahaan Xarumaha Ilays. Wuxuuna ka hadlay baahida loo qabo in la helo xarumo dheeraad ah oo lagu soo kordhiyo Nairobi iyo London. Isaga oo dhiiri galiyay shaqada wanaagsan ee ay qabteen xarunta cusub ee Nairobi laga sameeyay.
Intaa ka dib waxaa laga hadlay jadwalka ilays tv, iyada oo la isla gartay in la meel mariyo inay 4 maalmood barnaamijyada Ilays ka baxaan hawada. 3 dharaarood oo kamid ah barnaamijyadaas waxaa loo qoondeeyay Xarunta Ilays Nairobi inay hawada galiyaan. Maalin ka mid ahna waxaa loo qoondeeyay Xarunta Ilays ee London innuu ka baxo maalinta kasta oo Sabti ah.
Wararka waxaa lagu dhiiri galiyay inay diyaariyaan xarunta Ilays Nairobi halka lagu dhiiri galiyay in studiaha Ilays london uu xooga saaro diyaarinta barnaamijyo gaar ah.
Waxa si guud loo ansixiyay qorshahaas 4ta maalmood ah iyada oo laga hadlay sidii loo kordhin lahaa maalmaha hawada uu ka baxo, iyo sidii barnaamijkan looga dhigi lahaa mid ay daawan karaan guud ahaanba ummada soomaliyeed, Sidaas awgeed in la fiiriyo barnaamijyo ummada soojiidan kara in la diyaariyo.
waxaa lagu balamay in dib lagasoo qaban doono kulanka xiga oy kasoo qaygali doonaan dhamaan hawl-wadeenka Bahda Ileys.